Azo Atao ve ny Misaraka na Misintaka? | Fitiavan’Andriamanitra
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Féroïen Ga Galoà Garifuna Goujrati Grika Groenlandey Guarani Guna Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Japoney Jula Kabiyè Kambôdzianina Kannada Kazakh Kekchi Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kosrae Kreôla Maorisianina Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Litoanianina Lomwe Luganda Luo Macua Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Mazateky (Huautla) Mbunda Mixe Mizo Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Niue Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Ossète Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouïgour (Sirilika) Palau Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiché Rarotonga Romanianina Rosianina Rotumien Runyankore Rutoro Samoanina Sango Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Totonac Tseky Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Urhobo Venda Vezo Wallis Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Azo Atao ve ny Misaraka na Misintaka?
Takin’i Jehovah ny hanajan’ny olona ny voadim-panambadiany. Hoy izy rehefa nanome vady ho an’ilay lehilahy voalohany: ‘Ny lehilahy dia hikambana amin’ny vadiny, ary ho nofo iray ihany izy ireo.’ Naverin’i Jesosy indray izany tatỳ aoriana, ary nampiany hoe: “Aoka àry izay nampiraisin’Andriamanitra zioga, tsy hosarahin’olona.” (Genesisy 2:24; Matio 19:3-6) Fatorana mandra-maty àry ny fanambadiana, amin’i Jehovah sy Jesosy. (1 Korintianina 7:39) Masina ny fanambadiana ka tsy tokony hataotao foana ny fisaraham-panambadiana. Halan’i Jehovah mihitsy aza izany, raha tsy misy antony araka ny Soratra Masina.—Malakia 2:15, 16.
Hojerentsika izany antony araka ny Soratra Masina izany. Fantatsika fa halan’i Jehovah ny fanitsakitsaham-bady sy ny fijangajangana. (Genesisy 39:9; 2 Samoela 11:26, 27; Salamo 51:4) Tena maharikoriko azy ny fijangajangana, ka nataony antony azo isarahana. (Nohazavaina tao amin’ny Toko 9, fehintsoratra 7, ny atao hoe fijangajangana.) Omen’i Jehovah zo hanapa-kevitra ilay vady tsy diso raha mbola hijanona amin’ilay vady nijangajanga izy, na hisaraka. (Matio 19:9) Tsy halan’i Jehovah ilay fisaraham-panambadiana, amin’izay. Tsy mampirisika na iza na iza hisara-panambadiana anefa ny fiangonana. Mety hisy aza antony hahatonga ny sasany hanapa-kevitra hoe hijanona amin’ilay vady nijangajanga, indrindra raha tena mibebaka izy. Anjaran’ilay vady tsy diso ihany anefa ny manapa-kevitra raha hangataka fisaraham-panambadiana izy na tsia, ary tsy maintsy zakainy izay vokatry ny fanapahan-keviny.—Galatianina 6:5.
Mety hisy toe-javatra tsy azo anoarana hahatonga ny Kristianina hanapa-kevitra ny hisintaka na hisara-panambadiana, na dia tsy nijangajanga aza ilay vadiny. Hoy anefa ny Baiboly: “Aoka [izy] hitoetra ho tsy manambady na aoka hody amin’ny vadiny.” (1 Korintianina 7:11) Tsy afaka miaraka amin’olon-kafa sy manambady indray àry izy. (Matio 5:32) Mety hisintaka anefa ny olona iray noho ireto antony maningana ireto:
Minia tsy mamelona ny ankohonany. Mety ho lasa mahantra be ny fianakaviana iray, ary tsy hanana izay tena ilaina. Tsy mety mamelona azy ireo mantsy ilay lehilahy, nefa afaka manao izany. Hoy anefa ny Baiboly: “Raha misy tsy manome izay ilain’ny ... ankohonany, dia efa nanda ny finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino.” (1 Timoty 5:8) Mety hanapa-kevitra ny hisintaka àry ilay vehivavy raha tsy mety miova ilay lehilahy, satria te hiaro ny tenany sy ny zanany izy. Tokony handinika tsara ny anti-panahy, rehefa misy Kristianina ampangaina ho tsy mety mamelona ny ankohonany. Mety hahavoaroaka mantsy izany.
Tena mahery setra. Mety hahery setra be amin’ny vadiny ny olona iray, ka atahorana hampidi-doza ny fahasalamany na ny ainy mihitsy. Tokony hanadihady momba izany ny anti-panahy, raha misy Kristianina ampangaina ho manao izany. Mahavoaroaka ny fahazarana mampiasa herisetra sy ny fipoahan’ny fahatezerana matetitetika.—Galatianina 5:19-21.
Misakana tanteraka ny vadiny tsy hifandray amin’Andriamanitra. Mety hisy olona hiezaka foana hisakana ny vadiny tsy hanaraka ny fivavahana marina, na hanery azy handika ny didin’Andriamanitra mihitsy. Mety hisintaka ilay vadiny, raha izay ihany no ahafahany ‘mankatò an’Andriamanitra, fa tsy olona.’—Asan’ny Apostoly 5:29.
Amin’ireo toe-javatra tsy azo anoarana rehetra ireo, dia tsy misy tokony hampirisika an’ilay vady tsy diso mba hisaraka na hijanona amin’ny vadiny. Marina fa mety hanampy na hanome torohevitra avy ao amin’ny Baiboly ny namana matotra sy ny anti-panahy. Tsy hahalala ny tsipiriany rehetra eo amin’ny fiainan’ny mpivady mihitsy anefa izy ireo. I Jehovah ihany no mahalala izany. Tsy manaja an’Andriamanitra sy ny fanambadiana ny Kristianina raha manitatra ny olana eo aminy sy ny vadiny, satria fotsiny hoe te hisaraka aminy izy. Hitan’i Jehovah izay tetika rehetra foronin’ny olona mba hisarahana, na afenina mafy aza. ‘Mihanjahanja sy miharihary eo imason’ilay hanao ampamoaka antsika ny zavatra rehetra.’ (Hebreo 4:13) Raha mitohy foana anefa ilay toe-javatra mampidi-doza, ka tsy mahita vahaolana afa-tsy ny hoe misintaka ny Kristianina iray, dia tsy misy tokony hanakiana azy. “Samy hijoro eo anatrehan’ny fitsaran’Andriamanitra isika rehetra”, amin’ny farany.—Romanina 14:10-12.